Rahoviana CAN-SPAM no hivoatra mailaka taloha? | Martech Zone
Rahoviana CAN-SPAM no hivoatra mailaka taloha?
Alatsinainy, Septambra 18, 2006 Alakamisy, Jona 18, 2015 Douglas Karr
Ny FTC dia nanidy spammers vitsivitsy tato ho ato. Mbola olana goavana ny spam, mahazo hafatra an-jatony isan'andro aho. Azoko atao ny manivana ireo mailaka (nampiasa MailWasher aho taloha) saingy nilavo lefona. Misy fomba hafa azo soloina - mampiasa serivisy SPAM izay mitaky fahazoan-dàlana ho an'ny olona tsirairay handefa mailaka amiko, saingy tiako ny azo idirana.
Miitatra izao ny olana. Mahazo ny hevitro sy ny Trackback Spam amin'ny bilaogiko aho. Isan'andro, miditra aho ary misy hafatra 5 ka hatramin'ny 10 izay tsy azon'i Akismet. Tsy misy hadisoan'izy ireo - ny serivisin'izy ireo dia nahatratra SPAM mihoatra ny 4,000 tao amin'ny bilaogiko.
Rahoviana ny FTC no hiditra amin'ny karazana SPAM hafa ankoatry ny mailaka? Heveriko fa fampitahana tsara dia ity… Mividy magazay amin'ny arabe be dia be miaraka amin'ny fifamoivoizana aho. Raha vantany vao mifindra aho ary mahita ahy ny magazay SPAM eny an-dalambe dia te hahazo ny sasany amin'ny mpanjifako izy ireo. Ka - apetrak'izy ireo eo amin'ny varavarankelin'ny fivarotako ny peta-drindrina. Tsy mangataka alalana amiko izy ireo fa manao izany fotsiny.
Toy ny olona manantona afisy eo amin'ny fivarotako manao dokambarotra ny fivarotany. Fa maninona no tsy ara-dalàna izany?
Amin'ny tontolo tena izy dia haiko ny manajanona an'io. Azoko atao ny mangataka ilay olona hijanona, asaivo miantso azy ireo ny polisy, na amin'ny farany afaka hitory azy ireo aho na hiampangana amin'ny mpanao gazety. Na izany aza, amin'ny Internet, tsy vitako izany. Fantatro ny adiresin'ny SPAMMER… Fantatro ny sehatra misy azy (Izay onenany). Fa maninona aho no tsy afaka manidy azy? Heveriko fa tokony homena antsika ny asan-jiolahy sy fihetsika sivily omena antsika raha toa ka adiresin'ny arabe ny fivarotako (bilaogy).
Fotoana izao hanitarana ny lalàna sy hametrahana teknolojia aorian'ireo lalàna ireo. Heveriko fa ny SPAMMER IP dia tokony hosakanana tsy tapaka avy amin'ny mpizara anarana manerana an'izao tontolo izao. Raha tsy afaka nanatona azy ireo ny olona dia hijanona izy ireo.
Tags: Can-amin'ny spammailakafehezan-dalàna amin'ny mailakaftcfitsipi-pifehezana spam
Google Analytics hatramin'ny profil 50!